Finance Manager တစ်ယောက်ရဲ့ အနိမ့်ဆုံးလစာ ၅ သိန်းဆိုပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » Finance Manager တစ်ယောက်ရဲ့ အနိမ့်ဆုံးလစာ ၅ သိန်းဆိုပဲ
Finance Manager တစ်ယောက်ရဲ့ အနိမ့်ဆုံးလစာ ၅ သိန်းဆိုပဲ
Posted by manawphyulay on Oct 12, 2012 in Jobs & Careers |2comments
ကုမ္ပဏီ : Achieve Career Co., Ltd ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုဖတ်ရန်
ဖော်ပြချက် : Achieve Career Co., Ltd isaSpecialist Recruitment and Executive Search firm, in Yangon, Myanmar. Our organisation aims to deliver exceptional service to both clients and candidates.
ဆက်သွယ်ရန် : Achieve Career Co., Ltd
နေရပ်လိပ်စာ : No. 7(1st Floor), Thiri Mon Plaza, 4th Street, Mayangon Township, Yangon, Myanmar. မြန်မာ
တယ်လီဖုန်း : +95 (1) 9688 647
Finance Manager x 10 Positions (For Australian Company: Salary Kyats 500,000 to 1,500,000)
• Daily cash reconciliations, making staff, supplier and other payments
• Review operating expenses with various departments to ensure actual costs remain within budget.
• Support with supplier negotiations
• Review creditor reconciliations and establish overall opex exposure not accounted for in management accounts
• Create and processing payroll and journals
• Support local management team with all finance related matters
• Complete monthly cost analysis
• Assist with budget setting process
• Assist with development of AP and Treasury functions
• Regular, clear communications with regional head office
• Accounting or Finance related Degree or CPA
• Minimum5years experience in Accounting and Finance
• Previous experience of working inadynamic company and managing cash and suppliers
နေရာ Yangon and other Cities
500,000 to 1,500,000 Kyats
စာရင်းကိုင်ပညာ/ ဘဏ္ဍာရေး, Administration Staff.
Achieve Career Co., Ltd
လူအများစု အလုပ်တစ်ခုကို ချဉ်းကပ်လျှင် ပထမဆုံး လစာကို အဓိက ဦးစားပေးကြည့်ကြတယ် ။
တကယ်တမ်းတော့ လစာထက် ၊ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် နေရာက ၊ ဘယ်လောက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလဲ ၊ ဘာတွေ သင်ယူခွင့်ရှိမလဲ ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကစလို့ … ကိုယ့်အတွက် ဘာတွေ တိုးတက်လာမလဲ စတဲ့ …. တသက်လုံး သုံးလို့ ရမယ့် … အခွင့်ရေးဆိုတာမျိုးတော့ …ရနိုင်မရနိုင်တွေးဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြတယ် ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ … ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်လို့ ရမယ့် အခွင့်ရေးကို ဆိုလိုပါတယ် .. ပိုက်ဆံတော့ရပါရဲ့ တသက်လုံး သူများက လက်လှုပ်လက် ၊ ခြေလှုပ်ဆိုခြေ နောက်လိုက် အဖြစ်နဲ့ပဲ .. ဒီဘ၀နဲ့ မျောနေလျှင် နေမထူး သေမထူးလိုပဲ .. အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး ။
လစာကို ဦးစားပေးကြည့်ကြတာလည်း အပြစ်တော့မပြောလိုပါဘူး ၊ လတ်တလော ပြသနာတွေကို ဒီပိုက်ဆံ အနည်းများကပဲ ဖြေရှင်းပေးတာကိုး ….. ဒါပေသိ … ဒါပေသိ …. ပိုက်ဆံ နဲ့ အလုပ်တွေကို နှိုင်းဆရင်း .. တခုနဲ့ တခုသာ .. ခုန်သွားတယ် …… ဟိုဟာယောင်ယောင် ၊ ဒီဟာယောင်ယောင် ၊ တတ်တတ်မြောက်မြောက် ဘာမှ မရှိ ၊ မြောက်သစ်ကိုင်းလွတ်ဘ၀တွေနဲ့ … အသက်ကြီးတာတောင် စီဗွီလှည့်တင်နေရတဲ့ ဘ၀မျိုးတွေ မဖြစ်လာလျှင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ …… ။
Finance နဲ့ ပတ်သတ်လျှင်တော့ … ရွာထဲမှာ ကိုယ်သိတာဆိုလို့ … ချစ်တောမောင် ရှိတယ် … လက်တို့ လိုက်ပါဦးမယ် … ။ information ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ ။ :gee: